Dr, Abiy Ahmed Oromiyaa diigee Toophiyaa durii deebsuufi – Bilisummaa
“Jawaariin simatte naan jedhanii hojiirraa na dhorkan”
Dhuguma gaafiin Afaan Oromoo deebi’ee jiraa? Ililchitee harka dhawuu dura kana caqasi!
Yaalii ajjeechaa Jawar irratti raawwatamee keessaa eennu harka akka qaba?
OPDO abdachuu fi sobamanii jalatti of dagachuun akka ofiin of balleessuu (suicide)tti laalamuu qaba.
Jaarmiyaaleen Siyaasa Oromoo (JSO) ejjennoo waloo irra gahanii jiru.
67 dead in protests against Ethiopian PM Abiy: police, hospital
Oromoon gaafam haluu bahuu barata lataa?
We demand full protection for all political leaders currently active in Ethiopia including Jawar Mohammed
Ibsa Ijjannoo Baalee Ibsi kun Nafxanyaa fi Doorzee (Walaayitaa Walaamoo) ilaallata 1.Dinagdee:Nafxanyaa fi Doorzeerraa hin …
Abduselam: Barruu kana katabee galmee seenaa irra kayachuun kiyya hedduu na boonse. Nama it...